Ciyaaryahan reer France ah oo sheegay in Kylian Mbappé uu ku biiri doono Real Madrid – Gool FM
(Yurub) 27 Okt 2020. Daafaca reer France ee Adil Rami ayaa sheegay in xiddiga ay isku wadanka yihiin iyo naadiga Paris Saint-Germain ee Kylian Mbappé uu ku biiri doono Real Madrid.
Magaca Kylian Mbappé ayaa lala xiriirinayay inuu u dhaqaaqayo Real Madrid, maadaama madaxweynaha kooxda ee Florentino Perez uu si aad ah u xiiseynayo adeegiisa.
Kylian Mbappé ayaa sidoo kale in ka badan hal jeer si maldahan u sheegay sida uu u xiiseynayo u dhaqaaqista kooxda Real Madrid, wargeysyada Isbaanishka ayaa xaqiijiyay in Los Blancos ay ka shaqeyn doonto sida ay ku heli laheyd saxiixiisa sanadka soo aadan.
Haddaba Adil Rami oo la hadlayay “RMC Sport” ayaa wuxuu yiri:
“Waxaan u maleynayaa in heshiiska Kylian Mbappé ee ku aadan Real Madrid la dhameystiray, gaar ahaan tan iyo markii wadahadalada ku aadan ku biiritaankiisa la joojiyay in laga hadlo”.
“Waxaad leedahay aragti ah ka hadalka ku biiritaankiisa Real Madrid inay dhibayso isaga. Wuxuu dareemayaa xishood. Mustaqbalkiisa ayaa si kama dambeys ah loo qeexay, taasoo murugo ku ah PSG, xitaa horyaalka Faransiiska, aad ayaan u jeclahay laacibkan.
Waxaa xusid mudan in qandaraaska laacibka reer France Kylian Mbappé ee kooxdiisa Paris Saint-Germain uu dhacayo xagaaga 2022.